Dagaal Xoogan Oo Maanta Ka Dhacay Duleedka Degmada Baardheere * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dagaal u dhaxeeyo Ciidamadaka tirsan AMISOM gaar ahaan kuwa Kenya iyo Ururka Al Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in maanta uu ka dhacay duleedka Degmada Baardheere ee Gobalkaasi Gado.
Dagaalka oo socday wax kayar 30-daqiiqo ayaa la isku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan waxaana ka dhashay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay warbaahinta u xaqiijiyay Sarkaal ka tirsan maamulka Jubaland.
Dagaalka oo ahaa mid dhabo gal ah ayaa ka dhacay inta u dhaxeeya deegaanada Fax-faxdhuun iyo Tarako oo ku yaala duleedka Degmadaasi.
Weerarkan ayaa la sheegay in lagu gubay gaari ay la haayeen Milatariga Kenya oo ahaa nuuca Sahayda qaada.
Ma ahan Markii ugu Horeysay oo dagaalyahano ka tirsan Ururka Al Shabaab ay weeraro gaadmo ah la beegsaday Ciidamadda AMISOM.